Xorriyadda hadalka ama wax afka qalaad lagu yiraahdo (Freedom speech).
Wednesday July 14, 2021 - 09:30:56 in Articles by Xaaji Faysal
Intii lagu jiray xilligii caadiga ahaa, parrhesia waxay noqotay qayb aasaasi ah
Caadiyan aadamaha markuu ilaahay abuuray wuxuu siiyay karti iyo miizaan kasareeya kan noolaha ama uunka kale wuxuuna abuuray iyaga oo xor ah, taasina waxay cadaynaysaa in hadalka iyo ficilka adaamuhu uuyahay mid abuuritaan ah.
Intaa marka laga yimaado dunidan aynu maanta ku noolahay inteeda badan waxaa lagaga dhaqmaa shuruuc ku qoran kutub kuwaas oo laga tuujiyay caqliga iyo cilmiga aadamaha looguna tala galay inay noqdaan kuwa lagu kala hagmo (dhaqmo).
Giriiggii hore waxay hormood ka ahaayeen hadalka xorta ah oo mabda ’dimuqraadi ah. Ereyga Griigga ah "parrhesia" macnihiisu waa "hadalka xorta ah," ama "si daacadnimo leh u hadal." Ereygan ayaa markii ugu horreysay ka muuqday suugaanta Giriigga dhammaadkii qarnigii shanaad B.C.
Intii lagu jiray xilligii caadiga ahaa, parrhesia waxay noqotay qayb aasaasi ah oo dimoqraadiyadda Athens ah. Hogaamiyaasha, falsafada, qorayaasha riwaayadaha iyo dadka Athenia-ka maalin walba waxay xor u ahaayeen inay si furan uga doodaan siyaasada iyo diinta isla markaana meelaha qaar ku dhaleeceeyaan dowlada.
Waxaa jira xeerar iyo shuruuc qoran balse mid waliba ku dhaqankiisa lagu jaan gooyay halka ama wadanka markaasi lagaga dhaqmo,
waxaana lakoobay,layareeyay hadalka iyo codka aadamaha siloogu dheelitiro cawaaqibka ka imankara iyo masuuliyada garab socota waana waxa layidhaahdo ,, Freedom of speech comes with responsibility,, micnaha odhaahdan ayaa ah sidaad uhadlayso adiga ayay kuutaalaa balse waxaa jira masuuliyad kusaaran oo hadaad ka hoos marto buuga aadamuhu qoray ayaa laguu baadhi,, that is the truth,,
Haddii aan dhammaanteen uwada hadalno iska hadla, waxaan ku dambeyn doonnaa buuq aan kala go ’lahayn. Xeerar iyo nidaamyo la'aantood wada hadal lama yeelan karno sidaa darteedna hadalka waa in uu leeyahay hab-maamuuska asaasiga ah.